Holland America Line Inotanga Mwaka neCruise kuenda kuCaribbean
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Holland America Line Inotanga Mwaka neCruise kuenda kuCaribbean
Rotterdam itsva yeHolland America Line inosimuka nhasi, Mbudzi 5, na5 pm EST kubva kuFort Lauderdale, Florida, parwendo rwayo rwekutanga rweCaribbean - rwendo rwokudzoka nechikepe rwemazuva mashanu runoshanyira Bimini, Bahamas, uye kupedza mazuva maviri kuHalf Moon Cay. Ngarava yakasvika paPort Everglades Mbudzi 3 zvichitevera rwendo rwayo rwekutanga rwekuyambuka Atlantic iyo yakatanga kubva kuAmsterdam, Netherlands, Gumiguru 20.
Rotterdam inomaka ngarava yechipiri kudzokera kuFlorida ichifamba neCaribbean kuHolland America Line kubva pakatanga kumira indasitiri mwedzi makumi maviri yapfuura. Muna Mbudzi, ngarava ichabatanidzwa kuPort Everglades nePinnacle Class hanzvadzi-ngarava Nieuw Statendam neEurodam, iyo inotangawo mwaka wavo weCaribbean. Nieuw Amsterdam akatanga rwendo rweCaribbean kubva kuFort Lauderdale Gumiguru.
Mutsara wechikepe wakapemberera kubva kuRotterdam kuCaribbean nefafitera yekugamuchira vaenzi vari muchikepe, uye Antorcha aivepo achikwazisa vafambi.
Zvichitevera rwendo rweNov. 5, Rotterdam ichafamba nechikepe muCaribbean kusvika muna Kubvumbi, nerwendo rwose rwokudzoka kubva kuFort Lauderdale. Nzendo dzinobva pamazuva matanhatu kusvika ku11 uye dzinotenderera nharaunda kumaodzanyemba, kumabvazuva, kumadokero uye kunopisa. Vaenzi vari kutsvaga pekuzoenda kurebesa vanogona kutanga rwendo rwevaCollectors - nzira dzakasanganiswa dzekudzokera kumashure dzinopa kuongorora kwakadzama kunofukidza nzvimbo dzinopfuura imwe.
Yese yeCaribbean cruise inosanganisira runhare kuHalf Moon Cay, yakatemerwa nhamba-imwe chiteshi chekufona muCaribbean nevaenzi vemutsara. Iyi nzvimbo tsvene yakashanduka ikava nhandare yekutamba yevafambi uye inoratidzira mahombekombe egungwa machena-jecha, mavillas ane nhurikidzwa mbiri uye ma cabanas akavanzika, nzvimbo dzekudyira seLobster Shack, nzvimbo yemvura yevana uye dzakasiyana siyana dzakazadzwa kushanya kune vanoda zvisikwa, vafambi vanoshanya. uye vaongorori.